Iimbono zelogo yokufota: ezona logo zibalaseleyo ekufuneka ziphefumlelwe kunye noyilo | Abadali be-Intanethi
Ukufota ibisoloko iyenye yeendlela eziye zabonakala kakhulu kuyilo lwegraphic, kodwa ukuba sixuba ukufota kunye nesazisi, asazi ngokuqinisekileyo ukuba siqala njani ukudibanisa amaqhekeza yale phazili ibanzi.
Yiyo loo nto kuye kwafuneka ukuba unikeze uluhlu lweengcinga ukuze ukwazi ukuyila i-logo ecebisayo kwaye idlulise yonke imo kunye nobuntu bayo ngokwayo. Ukongeza, siza kukubonisa ezinye zeempawu zeenkampani ezizinikele kwicandelo le-audiovisual okanye icandelo lemifanekiso, oya kuthi ngokuqinisekileyo uyazi kwaye eziye zehla kwimbali malunga nendlela ezinxibelelana ngayo neenjongo zazo kwaye zibamele.
1.1 Ukufota kunye noyilo
2 Iingcamango zokwenza uphawu
2.3 ixabiso kunye neenjongo
2.4 Abaphulaphuli ekujoliswe kubo
2.5 Uhlobo lorhwebo
2.7 Uhlobo lokuchwetheza
2.8 Iziphumo kunye neegradient
2.9 Iiphalethi zombala
Ngaphambi kokukucebisa malunga nemiba ethile yesazisi okanye uphawu, kuyafuneka ukuba uchaze ukuba yintoni ukufota ukuze ukwazi ukudibanisa ezo ziqwenga ziwela ecaleni kwendlela. Ewe, ngokufutshane, ukufota bubuchule okanye umsebenzi oyinxalenye yoyilo lwegraphic kwaye inoxanduva lokuthatha kunye nokubonisa eminye yemizuzu esiyiphilayo kwaye iyiguqule ibe yifomu yomfanekiso.
Ukwenza lo mfanekiso wenze, kufuneka kube nokukhanya, Yingakho isiseko sokufota sisekelwe ekukhanyeni. Kodwa asifuni kuphengulula kwimiba yobuchwephesha kakhulu, kodwa endaweni yoko sifuna wazi ukuba sizakujongana ngantoni, kuyilo esiza kulwenza.
Ngamafutshane, ukuba sibeka ukukhanya kunye neglasi kunye, umfanekiso wento esinayo esijikelezileyo ucetywayo kwaye kubalulekile ukwazi ukuba ngaphandle kokukhanya, ukufotowa bekungayi kubakho.
Ukufota kunye noyilo
Umthombo: Arcadina Blog
Xa sithetha ngokufota njengelinye lamasebe oyilo, sifumanisa ukuba umyili ufanele abe nolwazi ngomfanekiso ekubeni usekelwe ekubeni yinto ekuya kufuneka asebenze nayo xa eyila. Ukongeza, awuzukufuna kuphela ulwazi lokufota kwaye loluphi uhlobo lomfanekiso oya kuwufuna ngamaxesha onke okanye ukuba uya kuwuhlela njani ukuze ulungele uyilo lwakho.
Kodwa uya kufuna ithiyori yomfanekiso apho i-psychology ingena khona. Ukuba sicinga ukuba ukufotowa bubugcisa nako Kufuneka sicinge ukuba uyilo luya kufuna umfanekiso kwaye ngale ndlela i-psychology kunye nohlalutyo olulandelayo ukuphendula imibuzo osele uyayazi, efana nale: into endifuna ukuyihambisa kunye nendlela endifuna ukuyihambisa ngayo.
Yiyo loo nto kubalulekile ukuba wazi kwaye uqonde ukuba kwakudala ngaphambi kokuyila i-logo kubalulekile ukwazi into esijongene nayo kwaye kutheni sijongene nayo. Ngamafutshane, xa siyila i-brand yenkampani ethile ezinikele ekufotweni, siqala ukusuka kwisiseko seengqikelelo ezinje: ikhamera, ukukhanya, injongo, ukubamba, iprojekthi, njl.
Kodwa kuyafuneka ukuba uqonde ukuba ezi ngqikelelo zithetha ukuthini, kuba uphawu lwethu lunokulayishwa uninzi lwazo ngaphandle kokubala ukuba lulayishwe uninzi lwazo. Nazi ezinye iimbono ukuze uqalise ukuyila.
Iingcamango zokwenza uphawu
Entre iingongoma eziphambili zi:
Ngaphambi kokuba uqalise ukuyila, kufuneka ucinge ngohlobo lwelogo oza kuyilwa, njengoko zininzi kwaye zahluke kakhulu. Uninzi lwazo luqala ngegama lomseki wenkampani, kule meko ilungile ukuba i-brand yakho iya kuba yeyomntu kwaye uya kusebenza ngokuzimeleyo. Kodwa kukho ezinye ezifuna igama elicacileyo nelibanzi kuba ibhrendi yakho inokuba yeyenkampani enkulu kakhulu. Ngokuqinisekileyo, Ngaphambi kokuba uqale ngomzekeliso, kufuneka ucinge malunga nokubiza amagama.
Ngethamsanqa kwaye ngelishwa, kukho iinkampani ezithengisa imveliso efanayo neyethu, kwaye oko akubi okanye kulungile, kodwa kuyinxalenye yemarike kunye nokhuphiswano lweenkampani. Kulungile ukuba nokhuphiswano, ngoko ke, kuyimfuneko ukuba Ngaphambi kokudala ibhrendi yakho, yazi ukuba ngoobani abo bakhuphisana nabo. Oku akukuncedi nje ukubeka ngcono uphawu lwakho, kodwa kuyakunceda ukuba ukhuthazwe kwaye ube nomzekelo omawuwulandele. Sukuhlala neyokuqala oyifumeneyo, yenza uphando olubanzi lwegeneric oluya kukunceda kwinkqubo yokhetho.
ixabiso kunye neenjongo
Amaxabiso kunye neenjongo zophawu luluhlu lweemfuno ekufuneka zibekho kwisiseko kunye nophuhliso lophawu. Kubalulekile ukuba ubonise abaphulaphuli bakho ukuba uza kunxibelelana njani nabo kunye nomfanekiso ofuna ukuwuveza kwabanye. Unokukhetha ukusebenzisa imilinganiselo enzulu neyakhayo ukuba ekuhambeni kwexesha unengqondo yokukhula kunye nokwandisa ixabiso lenkampani yakho. Okanye ngokuchaseneyo, unokukhetha imigangatho esezantsi apho ufuna ukufezekisa ngcono iinjongo zakho kwindawo encinci.
Abaphulaphuli ekujoliswe kubo
Abaphulaphuli ekujoliswe kubo kunyeYinto echaza ukuba ngubani oza kujolisa kuwo, leliphi icandelo okanye iqela labantu igama lakho eliya kujoliswa kulo. Ukwazi nokwazi impendulo yale mibuzo, kufuneka uthathele ingqalelo imiba enje: iminyaka, isondo, inqanaba lentlalo-ntle, inqanaba lentlalo-qoqosho, izinto ezithandwayo kunye nezinto ezithandwayo, njl. Iyinxalenye yamanqaku eqhinga lokuthengisa kwaye inceda ukubeka ngcono uphawu kwimarike. Nje ukuba uyazi ukuba abathengi bakho baya kuba ngubani, uya kuba nayo yonke into.
Xa sithetha ngohlobo lweshishini, sithetha ngohlobo lwenkampani ofuna ukuba yiyo. Kukho iintlobo ezininzi zamashishini, iivenkile ze-intanethi ezithengisa iimveliso zabo kwiimarike ze-elektroniki, izitolo eziphathekayo ezikwiidolophu ezahlukeneyo, iivenkile ezithengisa kuphela imifanekiso yazo kumaphepha ewebhu, njl. Ngaphambi kokuba uqalise ukuyila ibhrendi yakho, kufuneka ucinge ngohlobo lweshishini okanye inkampani oya kuyiprojekthi kubaphulaphuli bakho.
Ukuba awuzazi iintlobo zorhwebo ezikhoyo, sicebisa ukuba ubhale kwaye uzazise ngayo njengoko inokukunceda ufumane eyona ifanele isindululo sakho sokuqala.
Entre amanqaku esibini zi:
I-logo ngumfanekiso wenkampani oya kuchaza ibhrendi yakho. Uphawu oluza kusetyenziswa kuhlobo oluthile lokufota kufuneka lube lula kwaye lube lula ukulubona. Kule nto ungasebenzisa izinto zejometri ezikhupha ezinye zeekhamera ezifana ne-lens, injongo, ukuvula i-diaphragm, njl. Khumbula ukuba into nganye oyibandakanyayo kwibhrendi yakho iya kuchaza uhlobo lweshishini olilo kunye nendlela ozithengisa ngayo.
Kubaluleke kakhulu ukuba ifonti oyisebenzisayo ifundeke kwaye icoceke kangangoko, kuba yinto yokuqala eza kufundwa kwaye ayinakuba sengqiqweni ukusebenzisa ifonti enoluhlu olufundekayo olusezantsi. Sicebisa ukuba usebenzise i-sans serif typefaces okanye nge-serif eneenkcukacha, engabonakaliyo. Ayisiyiyo into yokuba ii-serif zezona zincinci zibonakalisiweyo, kodwa ngenxa yenkangeleko yazo, zihlala zineempawu zeklasikhi kwaye zinokuguga kwaye zitshintshe ngokupheleleyo umlingiswa wakho. Thatha le nto uyithathele ingqalelo njengoko yeyona nto ibalulekileyo kunye nezinto zegraphic ozongezayo kuyo.
Iziphumo kunye neegradient
Akunjalo ukuba ziintshaba eziphambili kuyilo lwe-brand, kodwa ukuba azizona zifanelekileyo kuba zinokungcolisa umfanekiso we-brand yakho. Kufuneka siyikhumbule loo nto uphawu akunyanzelekanga ukuba lubengezela kangangoko kodwa lube lusebenza kakhulu. Ukongeza ukukhanya okongeziweyo kakhulu okanye iziphumo zegradient kuyo kuya kwenza kuphela igama lebhrendi kunye nexabiso lilahlekile kwaye libhide abaphulaphuli bethu. Uphawu kufuneka luqulunqwe kuphela kwezo zinto sizibona ziyimfuneko, oko kukuthi, umfanekiso ocacileyo nolula.
Enye ingcaciso enokuthi ithathelwe ingqalelo yimibala yombala, kuyinto eqhelekileyo ukwenza iimvavanyo zombala kwaye ekugqibeleni uhlale kunye nemigangatho emibini okanye emithathu. Kuphephe ukuthathela ingqalelo imibala enjengomthubi okanye imibala eqaqambileyo ngokubonakalayo, ekubeni ayingabo abona banconyiweyo njengoko belahlekelwa ngumbono bekude. Gcina imibala efudumeleyo nebandayo engqondweni, yenza umahluko kwezi ntlobo zimbini zoluhlu kuba zihlala zezona zibonwa kakhulu kwiibrendi. Ngakolunye uhlangothi, ukuba ukhetha uphawu olulula ukuchonga, sebenzisa kuphela amathoni amnyama namhlophe okanye alula we-monochrome.
Ezi ibe zezona zimvo zilungileyo zokuyila ilogo okanye uphawu oluthile lwecandelo lokufota. Zininzi iinketho ezikhoyo xa siyila, kodwa zimbalwa ezisebenza ngakumbi okanye ezichanekileyo xa kuyilwa.
Unokwenza uluhlu olubanzi lokukhangela kwezona mpawu zibalulekileyo zokufota okanye ukhangele abafoti kwaye ukhuthazwe ziilogo okanye iibrendi zabo. Ukongeza, sinokwenza uthelekiso kunye ne-brand yethu kwaye ngaloo ndlela sijonge ukufana okanye umahluko phakathi kwabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » imibono yelogo yokufota